O buru na anyi jua Siri banyere WWDC, o gha agwa anyi? | Esi m mac
O buru na anyi jua Siri banyere WWDC, o gha agwa anyi?
Obi abụọ adịghị ya na Siri ekerewo òkè dị mkpa na isi okwu nke ụlọ ọrụ Cupertino n'oge na-adịbeghị anya na oge a ọ gaghị adị obere. Ọ bụ maka ịjụ onye enyemaka banyere ihe Apple ga-ewetara anyị na ọgbakọ ụwa a nke ndị mmepe na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ zaghị ihe ọ bụla nwere ike imebi ihe ịtụnanya nke mmemme ahụ, ọ zara anyị n'ụzọ na-atọ ọchị.
N'eziokwu, Siri bụ onye nlekọta iji kpughee ụbọchị ọrụ nke ihe omume a ga-amalite taa na Gralọ Mgbakọ Bill Graham na San Francisco. Nzaghachi ọmịiko nke onye enyemaka nwere ike iru Macs taa ma anyị ga-achọpụta n'ime awa ole na ole.
N'oge a ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iji onye inyeaka nke onwe ya na Apple Watch, na iPhone na iPad, yabụ anyị ga-egosi n'ime onyonyo ụfọdụ azịza ọ nyere anyị mgbe anyị jụsịrị ya ihe ha ga-egosi anyị na nke a 2016 WWDC.
Akụkọ banyere sistemụ ụlọ ọrụ dị nso na ekpughere ma anyị nwere olile anya ịgbanwe aha nke OS X anyị hụrụ n'anya na macOS, iji jikọọ sistemụ niile yana gịnị ma ịlaghachi aha ahụ ọ nwerela. Sistemụ n'oge gara aga. N'aka nke ọzọ anyị chọrọ ịhụ asịrị ma tụgharịarịrị na nsụgharị ụfọdụ dị egwu na-agba na ụgbụ, 13-anụ ọhịa Macbook ProAnyị doro anya na taa abịaghị n'oge maka ngwaike, mana ọ gwụla ma nke a chere na ọ bụ Mac ọhụrụ gosipụtara ya, ọ ga-abụ nnukwu ihe iji mezue isi okwu nke na-amalite ọgbakọ ndị mmepe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » O buru na anyi jua Siri banyere WWDC, o gha agwa anyi?
Otu esi ehichapụ nkwado ndabere nke TimeMachine
IMessage maka gam akporo os ngwaọrụ?